edX - ဟားဗတ်, MIT က & ပိုပြီးအားဖြင့်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » edX - အွန်လိုင်းဟားဗတ်နေဖြင့်သင်တန်းများ, MIT က & ပိုပြီး
edX - ဟားဗတ်, MIT က & ပိုပြီး APK ကိုအားဖြင့်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ
သင့်အလုပ်မှာတိုး - တော့မသင်တတ်ပါ
EdX သင်သည်အချိန်မရွေးအသစ်ကကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ယူနိုင်အောင်, သင့်မိုဘိုင်း device ကိုမှသင်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းသင်တန်းများတတ်၏ anywhere.Learn နှင့် fastest- စိုက်ပျိုးမှုတွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးဖို့အများဆုံး In-ဝယ်လိုအားကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင် လယ်ကွင်း: ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်း, ဒေတာသိပ္ပံ, အင်ဂျင်နီယာ, စီးပွားရေး, စီမံခန့်ခွဲမှု, စျေးကွက်, ဘဏ္ဍာရေး, စာရင်းကိုင်, သင်္ချာ, ဒီဇိုင်း, နှင့်ပိုပြီး။
ဒေတာသိပ္ပံ, ဒေတာ analysis နှင့်ကြီးမားသော data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာသင်ယူရန်လိုပါသလား?
သငျသညျဆက်သွယ်ရေး, လူ့စိတ်ပညာ, စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ, သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ, ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှု, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ခန္ဓာဗေဒ, စာရင်းဇယား, စက်သင်ယူမှုသို့မဟုတ်အတုထောက်လှမ်းရေးလေ့လာဖို့အွန်လိုင်းမှသင်တန်းချင်ပါသလား ကမ္ဘာတွင်သမိုင်းကိုသင်ယူချင်လေ့လာမှုဒဿနသို့မဟုတ်သင့်ပြောပြီဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကိုချဲ့ထွင်?
EdX နဲ့အတူသင့်ရဲ့အချိန်ဇယား FIT သောဘာသာရပ်များဖြင့်အချိန်မရွေးလေ့လာရန်:
- data တွေကိုသိပ္ပံ, blockchain, Python, စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပိုပြီးတွင်အွန်လိုင်းအတန်းကို download လုပ်ပါ Stream သို့မဟုတ်
- ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်မှ HTML ကိုပရိုဂရမ်ကနေမဆိုဘာသာရပ်ရှာရန်နှင့်ပိုပြီး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေး - စာရင်းကိုင်အတွက်သင်တန်းများ, စျေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှု, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု, ဘဏ္ဍာရေး, ဘောဂဗေဒ, အိုင်တီ, ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်, စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု, စစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအုပ်ချုပ်ရေး, fintech, အများပြည်သူစကားပြောနှင့်ပိုပြီး။
သင်္ချာ - အထက်တန်းကျောင်းကနေကောလိပ်အဆင့်သင်္ချာသင်တန်းများ, မာစတာကဲကုလ, စာရင်းဇယားများနှင့် algebra ရန်။
သိပ္ပံ & အင်ဂျင်နီယာ - ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း, ပစ္စည်းသိပ္ပံ, စက်ရုပ်, လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ, စက်မှုအင်ဂျင်နီယာနှင့်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာအပါအဝင်ဇီဝဗေဒ, ခန္ဓာဗေဒ, အသက်ရှင်ခြင်းကိုသိပ္ပံ, ဓာတုဗေဒ, ရူပဗေဒနှင့်အမျိုးမျိုးသောအင်ဂျင်နီယာသင်တန်းများအတွက်ထိပ်တန်းအွန်လိုင်းသင်တန်းများ။
ဘာသာစကား - စပိန်, တရုတ်, ပြင်သစ်, အင်္ဂလိပ်, ပင်ဘာသာစကားလက်မှတ်ထိုးလေ့လာပါ။
2000 အနုပညာ, ဥပဒေ, နိုင်ငံရေး, သမိုင်း, ဗိသုကာ, ဒဿန, စာပေ, အစားအစာနှင့်အာဟာရ, ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာအပါအဝင်နောက်ထပ်ဘာသာရပ်များအတွက်သင်တန်းများ, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစိတ်ပညာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, etc
EdX ၏အွန်လိုင်းသင်တန်းများကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားဖြင့်ဆုံးမသွန်သင်ကြသည်။ ဟားဗတ်, MIT က, UC Berkeley, Microsoft, ကိုလံဘီယာ, Wharton, အောက်စ်ဖို့နှင့် 100 သည်အခြားအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်အွန်လိုင်းကောလိပ်သင်တန်းများနှင့်သင်၏ပညာရေးကြွယ်ဝစေ။ ယခုအခမဲ့ဘို့ငါတို့သင်တန်းများကြိုးစားပါနှင့်သင့်ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ EdX အင်္ဂလိပ်, စပိန်, အီတလီ, မန်နှင့်ပြင်သစ်တွင်သင်တန်းများပေးထားပါတယ်။
အမေရိကန် Visits: edx.org
facebook.com/edx: အမေရိကန် LIKE
Us Follow: twitter.com/edxonline
- သင်ယခုမိုဘိုင်း application ကို အသုံးပြု. edX အစီအစဉ်များနှင့်ဒီဂရီရှာဖွေနိုင်ပါတယ်!
- အထွေထွေတိုးတက်မှုများနှင့် bug ပြင်ဆင်ခြင်းများ။
edX - အွန်လိုင်းဟားဗတ်နေဖြင့်သင်တန်းများ, MIT က & ပိုပြီး
10.78 ကို MB